पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा राजपानिकट लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघद्वारा तालाबन्दी
विराटनगर, १ साउन । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका भ्रातृ संगठन लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत एकलौटी तथा असमावेसी रुपमा विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्तिहरु गरिएको भन्दै संघले तालाबन्दी गरेको जनाइएको छ ।
‘प्राध्यापक संघ तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति बीच विगत २०६८ भदौ २७ गते भएको संझौतालाई समेत बेवास्ता गरी गरिएको सो नियुक्तिलाई अविलम्ब खारेज गरी पुनः यो संघको आपसी सहमति र सहकार्यमा यथासिघ्र नियुक्ति गर्नुहुन जोडदार माग गर्दछ ।’ संघका अध्यक्ष डा. उदयकिशोर तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तसर्थ, सोही संझौताको मूल्य र मान्यता अनुरुप नियुक्ति नगरुञ्जेलसम्मका लागि अनिश्चितकालीन रुपमा तालाबन्दी गरिएको अध्यक्ष डा. तिवारीले जनाएका छन् ।